Zakaria 3 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
3 Ary nasehony ahy i Josoa+ mpisoronabe izay nijoro teo anatrehan’ilay anjelin’i Jehovah, sy i Satana+ izay nijoro teo ankavanany mba hanohitra+ azy. 2 Ary hoy ilay anjelin’i+ Jehovah tamin’i Satana: “Hiteny mafy+ anao anie i Jehovah, ry Satana! Hiteny mafy anao anie i Jehovah, izay nifidy an’i Jerosalema!+ Tsy tapa-porohana nosarihana avy tao anaty afo+ ve io olona io?” 3 Ary nanao akanjo maloto be+ i Josoa tamin’izy nijoro teo anatrehan’ilay anjely. 4 Ary hoy ilay anjely tamin’ireo nijoro teo anatrehany: “Esory eny aminy ireny akanjo maloto ireny.” Fa hoy kosa izy tamin’i Josoa: “Efa namela ny fahadisoanao aho,+ ary akanjo mihaja be+ no hampanaovina anao.” 5 Dia hoy aho: “Aoka ny lohany hasian’izy ireo satroka lamba*+ madio.” Dia nasiana an’ilay satroka madio ny lohany, ary nampanaovina akanjo izy. Ary nijoro teo akaiky teo ilay anjelin’i Jehovah. 6 Koa nananatra an’i Josoa ilay anjelin’i Jehovah hoe: 7 “Izao no nolazain’i Jehovah Tompon’ny tafika: ‘Raha mandeha amin’ny lalako ianao, ary manao ny adidinao amiko,+ dia ianao no hitsara ny ao an-tranoko+ sy hiandraikitra ny tokotanin’ny tranoko. Ary havelako hiditra malalaka hankeo amin’ireo mijoro ireo ianao.’ 8 “‘Mihainoa, azafady, ry Josoa mpisoronabe, eny, mihainoa ianao sy ireo namanao mipetraka eo anatrehanao, fa olona atao fambara+ ireo namanao ireo. Fa hitondra an’ilay mpanompoko+ atao hoe Tsimoka+ aho! 9 Jereo ilay vato+ napetrako eo anatrehan’i Josoa! Maso fito+ no mibanjina an’ilay vato. Hataoko sokitra+ ny soratra eo aminy’, hoy i Jehovah Tompon’ny tafika, ‘ary hesoriko ao anatin’ny iray andro ny fahadisoan’ity tany ity.’+ 10 “‘Amin’izany andro izany’, hoy i Jehovah Tompon’ny tafika, ‘dia hifampiantso eny ambanin’ny voaloboka sy ny aviavy ianareo.’”+
^ Jereo F.F. 8.